Yan Aung: မက်တာမော်ဖိုးဆစ် ကောက်ကြောင်း
ဘလော့ဂ်ဆိုတာကြီးနဲ့ ကျွန်တော်စတင် ရင်းနှီးခဲ့တာ ၂၀၀၆ ခုနှစ် နှောင်းပိုင်းကာလလောက်မှာပါ။ အဲဒီ့အချိန်တုန်းက ကျောင်းလေးပြေးတက်လိုက်၊ အချိန်ပိုင်းအလုပ်လေး ပြေးလုပ်လိုက်နဲ့ ဘဝရည်မှန်းချက်တွေနောက်ကို မျက်ခြည်မပြတ် ဆက်တိုက်လိုက်နေခဲ့ပေမယ့်လည်း အားလပ်ချိန်လေးတွေမှာ အိမ်ကထည့်ပေးလိုက်တဲ့ မြန်မာစာအုပ်လေးတွေကို ဖတ်ရတာလောက် ပျော်ရွှင်နှစ်သက်ခဲ့မိတာမျိုး မရှိခဲ့ဖူးဘူး။ နောက်ပိုင်း သတင်းဝက်ဘ်ဆိုက်လေးတွေ ခေတ်စားလာတော့ ခေတ်ပြိုင်၊ ဒီဗွီဘီ၊ မိုးမခ စတဲ့ နေရာလေးတွေမှာ ကျင်လည်ဖြစ်ခဲ့သလို ရသစာပေလေးတွေကို စုစည်းတင်ပေးထားလေ့ရှိတဲ့ အိပ်မက်ဒေါ့ကွန်း၊ သံလွင်အိပ်မက် စတဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်လေးတွေဆီကိုပါ ရောက်ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ အဲဒီ့မှာပဲ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ခေတ်ဦးဘလော့ဂါတစ်ချို့ ရေးထားတဲ့စာလေးတွေကို စတင်ဖတ်ရှုခွင့် ရလာခဲ့တယ်။ ရှေ့ကစီနီယာ ဘလော့ဂါတွေကတော့ ယောင်္ကျားလေးတွေထဲမှာဆိုရင် ကိုညီလင်းဆက်၊ ကိုမောင်လှ၊ ကိုသခင်ကြီး၊ Arloo၊ ByteOrder နဲ့ ကိုကယ်(လ်)ဗျင်ကြီး၊ မိန်းကလေးတွေထဲမှာဆိုရင်တော့ မမေဓာဝီ၊ မနိုင်းနိုင်းစနေ၊ မအိမ့်ချမ်းမြေ့နဲ့ မဟနစံ စတဲ့ ဘလော့ဂါတွေပါပဲ။
ဘလော့ဂ်ဆိုတာကိုအင်္ဂလိပ်လို ရေးနေကြတာ မြင်ဖူးဖတ်ဖူးနေခဲ့ပေမယ့်လည်း မြန်မာလို ရေးလို့ရတယ်ဆိုတာကို သိလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာ ကျွန်တော်တစ်ယောက် အရမ်းကို ရူးသွပ်သွားခဲ့မိတယ်။ ‘ငါလည်း သူတို့လို ရင်ထဲရှိသမျှ အကြောင်းအရာလေးတွေကို ရေးတတ်ချင်လိုက်တာ၊ မြန်မာဘလော့ဂ်လေးတစ်ခု လုပ်တတ်ချင်လိုက်တာ’ ဆိုတဲ့စိတ်လေး တဖွားဖွားနဲ့ပေါ့။
အဲဒီ့အချိန်တုန်းက တစ်ခြားမြန်မာစကားလုံးတွေ ပေါ်နေခဲ့ပြီ ဆိုပေမယ့် ဘလော့ဂ်မှာ မြန်မာလိုရေးဖြစ်ဖို့ အများစုရွေးချယ်ဖြစ်ခဲ့ကြတာကတော့ ဇော်ဂျီဖောင့်ပါ။ ဘလော့ဂ်တစ်ခု တည်ဆောက်နည်းကစလို့ ဘလော့ဂ်မှာ မြန်မာဖောင့်သွင်းနည်း၊ FireFox တို့ Internet Explorer တို့မှာ မြန်မာစာပေါ်အောင် Setting ပြောင်းနည်းစတာတွေကို စိတ်ရှည်လက်ရှည်နဲ့ ပို့စ်လေးတွေတင်ပြီး ရှင်းလင်းရေးသားပေးခဲ့တဲ့ ခေတ်ဦးဘလော့ဂါတွေကို တကယ်ပဲ ကျေးဇူးတင်မိတယ်။ ဘလော့ဂ်တစ်ခု တည်ဆောက်ရာမှာ ကြုံတွေ့လာရနိုင်တဲ့ အခက်အခဲလေးတွေကို Screenshot ပုံလေးတွေရိုက်လို့ စိတ်ရှည်လက်ရှည် ရှင်းပြလိုရှင်းပြ၊ ကော်မန့်မှာလာမေးတဲ့ မေးခွန်းလေးတွေကို ပြန်ဖြေလိုပြန်ဖြေနဲ့ တကယ်ကို လက်တွဲခေါ်ခဲ့ကြတယ်။ ဒါ့အပြင် မြန်မာဘလော့ဂါတွေရဲ့ ဘလော့ဂ်နာမည်လေးတွေကို စုစည်းပြီး ဖော်ပြပေးထားတဲ့ မြန်မာဘလော့ဂ်လမ်းညွှန်(Myanmar Blogs Directory) ဘလော့ဂ်လေးတစ်ခုကိုလည်း လုပ်ပေးထားခဲ့ကြတယ်။ ကိုယ့်ဘလော့ဂ်နာမည်လေး ပါချင်တယ်ဆိုရင် အဲဒီ့ဘလော့ဂ်လမ်းညွှန်ရဲ့ ပို့စ်လေးအောက်မှာ ကော်မန့်လေးသွားရေးခဲ့ရုံပဲ။ နောက် သုံးလေးရက်၊ ဒါမှမဟုတ် တစ်ပတ်လောက်ကြာရင် ကိုယ့်ဘလော့ဂ်နာမည်လေးကို မြင်လာရတဲ့အချိန်မှာ ဘာရယ်မဟုတ်ဘဲ ရင်ထဲမှာ ပီတိလေးတစ်ခုကို ဖြစ်လို့။
ဘလော့ဂ်တစ်ခု စတည်ဆောက်လိုက်တဲ့ အချိန်မှာ သူများတွေလို ကလောင်နာမည်တွေ ဘာတွေပေးဖို့ ရည်ရွယ်ချက် မရှိခဲ့သေးဘူး။ လောလောဆယ် ရေးချင်တာရေးရပြီးရော ဆိုတဲ့စိတ်လေးနဲ့ပဲ ဘလော့ဂ်တစ်ခုကို ခပ်လွယ်လွယ် တည်ဆောက်လိုက်တယ်။ ပြီးတော့ မြန်မာဖောင့်လေးတွေ သွင်းတယ်။ ကိုယ့်ဘလော့ဂ်လေးကို ကျောင်းခန်းထဲက တစ်ခြားကွန်ပျူတာလေးတွေနဲ့ ပြန်လိုက်ဖတ်ကြည့်လိုက်၊ Template ပြောင်းတာလေးတွေ လုပ်ကြည့်လိုက်နဲ့ ဈာန်ဝင်စားပြီး နစ်မျောနေခဲ့မိလိုက်တာများ သောကြာ၊ စနေလို ညမျိုးတွေဆို သူငယ်ချင်း ကျောင်းသားတွေ ပါတီမှာ ကဲနေသလောက် ကျွန်တော်ကတော့ အခန်းလေးထဲမှာ တကုပ်ကုပ်နဲ့ ကိုယ့်ဘလော့ဂ်ကို ကောင်းကောင်းကလိနေခဲ့မိတဲ့အထိ။ ဘာတွေပြန်ရမယ် မရဘူးဆိုတဲ့ အတွေးမျိုးတော့ စိုးစဉ်းမျှ မရှိခဲ့ပါဘူး။ လုပ်ချင်တာလေးကို စိတ်ဝင်စားမှုအပြည့်နဲ့ လုပ်နေရရင်ကို ကျေနပ်နေတတ်တဲ့ စိတ်ခံစားချက်မျိုးလေးနဲ့ပါပဲ။
စရေးဖြစ်ခါစတုန်းကတော့ ဘာရယ်မဟုတ်ဘူး။ ဖတ်ဖူးမှတ်ဖူးတဲ့ စာတိုပေစလေးတွေကို တစ်ခြားသူတွေ ဖတ်စေချင်တဲ့ စိတ်လေးနဲ့ ပြန်ပြီးရိုက်တင်တာမျိုး၊ နေ့စဉ်ဖြတ်သန်းမှု ဘဝပုံရိပ်လေးတွေထဲက အဆင်မပြေမှုလေးတွေကို ဟာသလေးနှောပြီး ပြန်လည်ဖောက်သည်ချတာမျိုး၊ ဘလော့ဂါတစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်စကြ၊ နောက်ကြတဲ့ တက်(ဂ်)ပို့စ်လေးတွေကို အပျော်သဘော ရေးတာမျိုးလောက်ပဲ ရှိခဲ့တယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ ကိုယ့်ဘလော့ဂ်အတွက် လိုင်းတစ်ခုခုတော့ ယူပြီးရေးသင့်တယ်လို့ ထင်လာမိတယ်။ သူများတွေလို ရသဝတ္ထုလေးတွေ၊ ကဗျာလေးတွေ ကျွန်တော်က မရေးတတ်လေတော့ ကိုယ်တတ်နိုင်တာကို ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာ ဘလော့ဂ် ကလိတာကို စိတ်ဝင်စားတယ်လို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို မှတ်ချက်ချမိလိုက်တယ်။
ဒီလိုနဲ့ပဲ ဘလော့ဂ်တစ်ခုကို အီးအိုတီထည့်နည်း (မြန်မာစာမထည့်ထားတဲ့ ဘယ်ကွန်ပျူတာကနေမဆို ကိုယ့်ဘလော့ဂ်ကို မြန်မာလို ဖတ်လို့ရအောင်လုပ်တာပါ)၊ Music Player လေးတွေနဲ့ သီချင်းတင်နည်း၊ CBox လေးတွေကို အလှဆင်နည်း၊ တန်းပလိတ်လေးတွေကို ပြင်နည်းစတဲ့ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာTutorial ပို့စ်လေးတွေကို ဆက်တိုက်ဆိုသလို ရေးဖြစ်လာခဲ့တယ်။ အဲဒီ့အချိန်တုန်းက ကျွန်တော့်နည်းတူ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာပို့စ်လေးတွေကို ရေးဖြစ်နေတဲ့ ဘလော့ဂါတွေ ရှိကြပါတယ်။ ထင်ထင်ရှားရှား မှတ်မိနေခဲ့တာတွေကတော့ ကိုစေတန်ဂေါ့၊ ကိုဖိုးချမ်း (ချမ်းမြစိုး)နဲ့ ကိုမင်းကျော် တို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ထပ်မျိုးဆက်သစ်အနေနဲ့ ကိုသံလုံငယ်၊ ကိုညီနေမင်း စတဲ့ဘလော့ဂါတွေက နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ပို့စ်လေးတွေကို ဆက်လက်ရေးသားဖြစ်တာကို သတိထားလာမိခဲ့တယ်။
ကျွန်တော်ဘလော့ဂ်စရေးဖြစ်တဲ့ နောက်ပိုင်းမှာတော့ ကိုညီလင်းဆက်တို့၊ ကိုမောင်လှတို့က နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာပို့စ်တွေကို သိပ်ပြီးမရေးတော့သလောက် ဖြစ်သွားကြတယ်။ သူတို့လုပ်ပေးနိုင်သလောက် လုပ်ပေးခဲ့ပြီးပြီလို့ ယူဆမိလို့လည်း ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်အနေနဲ့တော့ ဘလော့ဂ်နည်းပညာပို့စ်လေးတွေအတွက် ကုန်ကြမ်းရနိုင်မယ့် တစ်ခြားနိုင်ငံပေါင်းစုံက ဘလော့ဂါတွေရဲ့ Tutorial Post လေးတွေကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် လိုက်လံဖတ်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ ပြီးတော့ သူတို့ပြောတာလေးတွေကို စမ်းသပ်ကြည့်ဖို့အတွက် Test Blog လေးတွေကိုလည်း တည်ဆောက်ခဲ့တယ်။ ကျောင်းကပြန်လာတာနဲ့ ကျောပိုးအိတ်ကို ကုတင်ပေါ်ပစ်တင်၊ အဆာပြေမုန့်စားပြီး ကျွန်တော်ဖတ်ထား၊ စမ်းထားတာလေးတွေကို ပုံလေးတွေနဲ့တွဲလို့ ဝေဝေဆာဆာလေးတွေ တင်ပေးခဲ့တယ်။ စာသင်တာကို ဝါသနာပါခဲ့တဲ့ အထုံပါရမီကြောင့်ပဲ ထင်ပါရဲ့။ နည်းပညာပို့စ်လေးတွေအတွက် ရှင်းပြ၊ ရေးပြပေးခဲ့ရတာတွေကို မောတယ်ပမ်းတယ်လို့ ကျွန်တော်မယူဆခဲ့မိဘဲ ပျော်ရွှင်နေခဲ့မိတယ်။ နည်းပညာပို့စ်လေးတွေအပြင် ကြားညှပ်လို့ ကဗျာလေးတွေ၊ အက်ဆေးလေးတွေ၊ အပျော်တမ်း ဝတ္ထုတိုလေးတွေ စမ်းသပ်ရေးကြည့်ဖြစ်ခဲ့တယ်။
ဒါ့အပြင် စိတ်တူကိုယ်တူ ဘလော့ဂါတွေ စုပေါင်းတည်ထောင်ထားခဲ့တဲ့ မြန်မာဘလော့ဂါဖိုရမ်မှာလည်း ဖိုရမ်ထိန်း (မော်ဒရေတာ) တစ်ယောက်အနေနဲ့ တက်တက်ကြွကြွ ဝင်ရောက်ဆွေးနွေးဖြစ်ခဲ့တယ်။ အတိုင်းအတာတစ်ခုထိ ကိုယ့်ဖက်က အချိန်တွေ ပေးဆပ်ခဲ့ရတဲ့အတွက် ဘဝအောင်မြင်ရေးအတွက် ကြိုးစားနေခဲ့ချိန်လေးတွေထဲက ပဲ့ထွက်ဆုံးရှုံးမှုတွေ ရှိကောင်းရှိခဲ့နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကိုယ့်မြန်မာလူငယ်တွေ အချင်းချင်းကြားမှာ နည်းပညာပြန့်ပွားသည်ထက် ပြန့်ပွားအောင် တတ်နိုင်သလောက် အပြန်အလှန် ယိုင်းပင်းကူညီနေခြင်းဆိုတဲ့ ခံစားချက်လေးက အလုပ်ကိစ္စ၊ ကျောင်းကိစ္စနဲ့ ပင်ပန်းနွမ်းလျနေတဲ့ စိတ်အမောကို ဖြေဖျောက်ပေးစွမ်းနိုင်ခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့်မို့ ကျောင်းစာတွေကိုလည်း နိုင်အောင်ထိန်းရင်း တစ်ဖက်မှာလည်း ဘလော့ဂ်ပို့စ်လေးတွေကို ပုံမှန်ဆက်ရေးဖြစ်ခဲ့တယ်၊ ဖိုရမ်မှာလည်း အချိန်မှန်မှန် ဝင်ရောက်ဆွေးနွေးဖြစ်ခဲ့တယ်။ အခုတော့ အဲဒီ့မြန်မာဘလော့ဂါ ဖိုရမ်လေးလည်း ဘယ်ဆီရောက်သွားတယ် မသိတော့ပါဘူး။
ဒါပေမယ့် အဲဒီ့ဖိုရမ်လေးကတဆင့် ကျွန်တော်တို့ မြန်မာဘလော့ဂါတွေ ပိုမိုစည်းလုံးလာခဲ့ကြတယ်။ ကမ္ဘာအရပ်ရပ်မှာ ရှိနေခဲ့ကြတဲ့ မြန်မာဘလော့ဂါတွေ စုပေါင်းပြီး အပျော်တမ်း စာအုပ်လေးတစ်အုပ် စုစည်းထုတ်ဝေဖို့ထိ ကြိုးစားခဲ့ကြတယ်။ စိတ်ဝင်စားတဲ့ ဝါသနာရှင်တွေရဲ့ ပို့စ်လေးတွေကို စုစည်းပြီး စာအုပ်လေးတစ်အုပ် ဖြစ်မြောက်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့ကြရာမှာ စာမူစုစည်းဖော်ပြရေးအဖွဲ့၊ စာမူရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့၊ ရန်ပုံငွေကောက်ခံရေးအဖွဲ့၊ စာအုပ်နာမည်ရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့ စသည်ဖြင့် ကော်မတီလေးတွေဖွဲ့လို့ တက်ညီလက်ညီ လက်တွဲဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတယ်။ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ကမ္ဘာကြီးတစ်ဖက်ဆီမှာ ခြားနေခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ နယ်တွေစည်းတွေဟာ ကျွန်တော်တို့ ဘလော့ဂါတွေအကြားမှာတော့ ရယ်စရာတစ်ခုလိုကို ဖြစ်လို့။ အဲဒီ့တုန်းက ပေးခဲ့တဲ့ ဘလော့ဂ်စာအုပ်လေးရဲ့ နာမည်လေးကို မှတ်မိနေသေးတယ်။ “အနာဂတ်လှိုင်း၏ ဆုံမှတ်များ” တဲ့။
၂၀၀၇ ရွှေဝါရောင် တော်လှန်ရေးနဲ့အတူ မြန်မာဘလော့ဂ်တွေ တဟုန်ထိုးခေတ်စားလာခဲ့တယ်။ ဘလော့ဂ်တစ်ခု တည်ဆောက်ရတာဟာလည်း ငှက်ပျောသီးအခွံခွာစားရတာထက်တောင် ပိုမိုလွယ်ကူလာခဲ့တယ်။ ဒါ့အပြင် ဒီမိုကရေစီ အရေးလှုပ်ရှားတက်ကြွတဲ့ ဘလော့ဂါတွေနဲ့ စစ်အစိုးရဖက် ထောက်ခံရေးသားတဲ့ ဘလော့ဂါတွေဆိုပြီး ကွဲပြားလာကြပြန်တယ်။ ဘလော့ဂ်တွေရဲ့ လွှမ်းမိုးလှုပ်ကိုင်နိုင်စွမ်းကို သဘောပေါက်နားလည်ခဲ့တဲ့ စစ်အစိုးရကလည်း မြန်မာဘလော့ဂ်တွေကို အငြိုးထားပြီးတော့ကို ပိတ်ပင်ချေမှုန်းခဲ့တယ်။ ဘလော့ဂါ ကိုနေဘုန်းလတ်ကို အီလက်ထရွန်းနစ် အက်ဥပဒေအကြောင်းပြပြီး ဖမ်းဆီးထောင်ချခဲ့တယ်။ ဘလော့ဂါတွေ မှတ်လောက်သားလောက်အောင် ဆိုတဲ့ သဘောနဲ့ စံနမူနာထားပြီး ခပ်ကြမ်းကြမ်း အရေးယူပြခဲ့တယ်။
အရောင်တွေဝင်လာတဲ့ ဘလော့ဂ်တွေအကြားမှာ အရင်တုန်းကလို ဘလော့ဂါတွေ အချင်းချင်း ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် ကူးလူးယှက်နွယ်ပြီး စခဲ့နောက်ခဲ့ကြတာတွေဟာလည်း အရှိန်နည်းနည်းတန့်ကုန်ကြတယ်။ ဘလော့ဂ်တွေရဲ့ ကော်မန့်တွေနေရာမှာလည်း ချစ်စဖွယ် စကားလုံးလေးတွေအစား ရုန့်ရင်းကြမ်းတမ်းတဲ့ ဝေါဟာရတစ်ချို့ အစားဝင်ရောက်လာခဲ့တယ်။ ဘလော့ဂါတစ်ဦးနဲ့ တစ်ဦးကြားမှာလည်း သတိလေးထားလို့ ဆက်ဆံပြောဆိုတတ်လာကြတယ်။ ဒီလိုနဲ့ ဘလော့ဂါတစ်ချို့ စိတ်ပျက်လက်ပျက်ဖြစ်ပြီး ဘလော့ဂ်ရေးသားခြင်းကနေ အပြီးအပိုင် အနားယူခဲ့ကြသလို ဘလော့ဂါတစ်ချို့လည်း ဂုဏ်သတင်း ပိုမိုထင်ပေါ်လာခဲ့ကြတယ်။ နစ်နေမန်း၊ ဆုံစည်းရာ၊ ရဲရင့်(ကနေဒါ)၊ ဖိုးတရုတ်၊ ယောဟန်အောင်၊ မင်းဒင်စတဲ့ ဘလော့ဂါတွေကို လူသိပိုများလာခဲ့ကြတယ်။
ဘလော့ဂါတွေကြား ကျယ်ပြန့်လာခဲ့တဲ့ အက်ကြောင်းလေးတစ်ခုနဲ့အတူ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဘလော့ဂ်စာအုပ် ထုတ်ဝေဖို့အစီအစဉ်လေးဟာလည်း တဖြည်းဖြည်း ရေစုန်မျောသွားခဲ့ရတယ်။ တစ်ခုအဖတ်တင်လိုက်တာကတော့ ဘလော့ဂါဖိုရမ်ကနေ တဆင့် မြန်မာပြည်ရဲ့ ပထမဆုံးဘလော့ဂ်ဒေးကို ကျင်းပဖို့ တိုင်ပင်စီစဉ်နိုင်ခဲ့ကြတယ်။ ဘလော့ဂ်ဒေး ကျင်းပဖို့အတွက် ရန်ပုံငွေလေးတွေကိုတောင် လုပ်ခလစာလေးထဲကနေ တစ်နိုင်ပို့ဖြစ်လိုက်သေးတယ်။ ရန်ကုန်နဲ့ မန္တလေးမှာ ဘလော့ဂ်ဒေး ကျင်းပကြတာလေးတွေကို လိုက်ဖတ်ရင်း ဘလော့ဂ်ဒေးကို တစ်နေ့တော့ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ တက်နိုင်အောင် ကြိုးစားဦးမယ်ဆိုတဲ့ စိတ်လေးတောင် ဖြစ်ခဲ့မိဖူးပါရဲ့။ ဘလော့ဂ်ဒေးနဲ့အတူ မြန်မာဘလော့ဂါရပ်ဝန်း (သို့) Myanmar Bloggers Society (MBS) ဆိုတဲ့ အဖွဲ့အစည်းလေးတစ်ခုကိုလည်း တည်ထောင်နိုင်ခဲ့ကြတယ်။ MBS ရဲ့ လက်စွဲဆောင်ပုဒ်လေးက “We Unite. We Blog” တဲ့။
၂၀၀၇ နောက်ပိုင်းမှာတော့ ကျွန်တော်လည်း တဖြည်းဖြည်း စာရေးကျဲလာခဲ့တယ်။ နောက်ပိုင်း တစ်လကို တစ်ပုဒ်မပြောနဲ့၊ သုံးလေးလနေလို့မှ တစ်ပုဒ်တောင် ရေးမထွက်တော့ပါဘူး။ ဒီလိုနဲ့ပဲ ကျွန်တော့်ဘလော့ဂ်လေးလည်း ဖုတ်လှိုက်ဖုတ်လှိုက်နဲ့ အသက်ငင်နေခဲ့တာ ဒီနေ့ဒီအချိန်ထိပါပဲ။ ပိုဆိုးသွားစေတာက မြန်မာလိုရေးနိုင်တဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ဆိုတာကြီး ပေါ်လာခဲ့တယ်။
ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ရဲ့ လွှမ်းမိုးမှုကို အစက အဲဒီ့လောက်ထိ ထည့်တွက်မထားမိခဲ့ဘူး။ ကိုယ့်ဖာသာ ဘလော့ဂ်မှာ ရေးတာက တစ်ပိုင်း၊ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်သုံးတာက တစ်ပိုင်းလို့ပဲ ခပ်လွယ်လွယ် မှတ်ယူထားခဲ့မိတယ်။ ဒါပေမယ့် နောက်ပိုင်းမှာ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ရဲ့ လွှမ်းမိုးမှုက အက်ဆစ်တိုက်စားသလို တရွေ့ရွှေ့နဲ့ ဘလော့ဂ်တွေကို တိုက်စားလာခဲ့တယ်။ ဘလော့ဂ်ပေါ်မှာ ပို့စ်တစ်ခုတင်ဖို့အတွက် ပြင်ဆင်ရေးသားရတာ ကြာသလောက်၊ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ပေါ်မှာကျတော့ စာတစ်ကြောင်း၊ စာတစ်ပိုဒ်လောက်နဲ့တင် ပို့စ်တစ်ခု ဖြစ်လာတတ်လေတော့ လိုရင်းတိုရှင်းပြောကြ ဆိုကြ၊ အတွေးအမြင်တွေ ဖလှယ်ကြတဲ့ဖက်ကို ပိုအားသန်လာကြတယ်။ ဒီလိုနဲ့ပဲ ဘလော့ဂါတွေ တော်တော်များများဟာ မိမိတို့ရဲ့ ဘလော့ဂ်လေးတွေကို ဖယ်ခွာပြီး ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ပေါ်မှာပဲ အချိန်ပိုသုံးလာကြတော့တယ်။
ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်က လူတွေတော်တော်များများရဲ့ စိတ်ကိုဖမ်းစားထားနိုင်တယ်။ သူ့ပေါ်မှာ စတေးတပ်စ်လေးတစ်ခု တင်လိုက်တာနဲ့တင် ကိုယ့်ရင်ထဲက ခံစားချက်တစ်ခုခုကို ပြောပြနိုင်လေတော့ ဘလော့ဂ်မှာ ပို့စ်တွေ မတင်နိုင်ကြတော့တာ သိပ်တော့မဆန်းလေဘူးလို့လည်း ကျွန်တော်တွေးမိတယ်။ ဒါပေမယ့် ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ပေါ်မှာ တင်လိုက်တဲ့ စတေးတပ်စ်လေးတွေဟာ ကျွန်တော်တို့ ဘလော့ဂ်တွေပေါ်မှာ ရေးခဲ့ဖူးတဲ့ ဘလော့ဂ်ပို့စ်လေးတွေလောက် မှတ်မှတ်ထင်ထင် ဖြစ်ကျန်ခဲ့တာမျိုး မရှိတတ်ကြပြန်ဘူး။ တစ်ချိန်က ကျွန်တော်တို့ ခံစားချက်တွေ သွန်ပြီးရေးခဲ့တင်ခဲ့တဲ့ ဘလော့ဂ်ပို့စ်လေးတွေဟာ အခုချိန်ထိ မဂ္ဂဇင်း၊ ဂျာနယ် စတာတွေကို ပို့ဖို့အတွက် ဒေါင်ဒေါင်မြည် အစမ်းသပ်ခံနိုင်ကြသလို ဘလော့ဂါတွေ အချင်းချင်း စုစည်းထုတ်ဝေကြတဲ့ စာအုပ်လေးတွေအတွက်လည်း ဝံ့ဝံ့စားစား စင်တော်ကောက်ခံနိုင်ကြတယ်။ ပြီးတော့ သတင်းအချက်အလက် တစ်ခုခုအတွက် ပြန်ပြီးညွှန်းဆိုတာမျိုးလေးတွေ လုပ်နိုင်ဖို့အတွက်လည်း ခိုင်ခိုင်မာမာ နေရာလေးတစ်ခုကို ရယူထားတတ်ကြပြန်တယ်။ ဒါ့အပြင် ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်မှာ စာရေးဖို့လုပ်ပေးထားတဲ့ Notes ဆိုတဲ့ Feature လေးကလည်း စာပိုဒ်တွေကို အဆင်ပြေအောင် စီမံခန့်ခွဲတာမျိုး၊ ပြင်ဆင်နေရာချတာမျိုးလေးတွေ လုပ်မရပြန်လေတော့ ဘလော့ဂ်ဖက်ကိုလည်း ကျွန်တော်တို့မှာ လုံးလုံးကြီး စိတ်မကုန်နိုင်ကြပြန်လေဘူး။
ဒီလိုနဲ့ နောက်ပိုင်းမှာ ဘလော့ဂ်ကို စိတ်မကုန်နိုင်သေးတဲ့ ကျွန်တော်တို့ ဘလော့ဂါတွေဟာ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်မှာလည်း စာရေးလို့ မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားရင်း ဘလော့ဂ်မှာ ရေးဖြစ်တဲ့ ပို့စ်အသစ်လေးတွေကိုလည်း ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်မှာ ဝေမျှတာမျိုးလေးတွေကို တပြိုင်တည်း လုပ်လာကြတယ်။ ဒီလိုမျိုးလုပ်လာရလိမ့်မယ်လို့ ဘယ်သူကမှ မမျှော်လင့်ခဲ့ကြပေမယ့်လည်း ကြုံဆုံလာတဲ့ အခြေအေနမှာ ကိုယ်သံယောဇဉ်ရှိနေဆဲဖြစ်တဲ့ ဘလော့ဂ်လေးတွေကို တတ်နိုင်သလောက် လက်တွဲခေါ်ယူနေကြတဲ့ လုပ်ရပ်လေးကို ကျွန်တော်တော့ ချစ်မြတ်နိုးမိတယ်။
အချိန်တွေပြောင်းလဲလာတာနဲ့အမျှ အွန်လိုင်းပေါ်က ဘလော့ဂါစာရေးဆရာတွေဟာ အပျော်တမ်းရေးသားရုံတင် မကတော့ဘဲ ပုံနှိပ်စာပေလောကထဲကိုပါ ခြေလှမ်းဆန့်လာခဲ့ကြပါတော့တယ်။ သက်ဝေ၊ နေဘုန်းလတ်၊ သတိုး၊ ဏီလင်းညို၊ ပန်ဒိုရာ၊ ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်)၊ ညီညီသံလွင်၊ ချစ်ကြည်အေး၊ မြသွေးနီ၊ သူရဿဝါ၊ အိမ့်ချမ်းမြေ့၊ မောင်ရေချမ်း စတဲ့နာမည်လေးတွေဟာ ဂျာနယ်၊ မဂ္ဂဇင်းစာမျက်နှာလေးတွေထက်မှာ ဟိုဟိုသည်သည် တွေ့လာခဲ့ရပါတယ်။ ကဗျာကဏ္ဍမှာ ဆိုရင်လည်း ဘလော့ဂါ ပန်ဒိုရာရဲ့ စီစဉ်မှုနဲ့ “ကြိုးညှိခြင်း” မြန်မာအမျိုးသမီးကဗျာများ စုစည်းမှုဆိုတဲ့ စာအုပ်လေးဟာ ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဩဂုတ်လမှာ ထွက်ရှိခဲ့ပါတယ်။
တစ်ချိန်က မဖြစ်မြောက်ခဲ့တဲ့ အိပ်မက်တစ်ချို့ကို အကောင်အထည် ပြန်ဖော်ဖို့အတွက် မြန်မာဘလော့ဂါ ဆယ်ဦးပါဝင်တဲ့ စာအုပ်လေးတစ်အုပ်ကို စာရေးဆရာ ဘလော့ဂါ မမြသွေးနီရဲ့ ဆက်သွယ်ပေးမှုနဲ့ ၂၀၁၂ မေလမှာ အဝေးကနေပဲ ကျွန်တော်စီစဉ်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ အဲဒီ့နောက် ၂၀၁၂ စက်တင်ဘာလကုန်လောက်မှာ AMK Creations က ကိုမော်ကြီး (သို့) စာရေးဆရာ ကိုညိုရင့်ရဲ့ အနီးကပ်ပံ့ပိုးကူညီပေးမှုတွေနဲ့အတူ “သက်တံဆယ်စင်း” ဆိုတဲ့ ရသစာစု စာအုပ်လေးတစ်အုပ်ကို ထုတ်ဝေနိုင်ခဲ့တယ်။ အကျိုးအမြတ်ကို ပဓာနမထားဘဲ မက်ခဲ့ဖူးတဲ့ အိပ်မက်လေးတစ်ခုကို ပြန်လည်အသက်သွင်းနိုင်ခဲ့တာကြောင့် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုတွေ တက်လာခဲ့သလို ခံစားခဲ့ရတယ်။
အဲဒီ့နောက်မှာတော့ ဘလော့ဂါတွေကြား စုစည်းထုတ်ဝေတဲ့ ပုံနှိပ်စာအုပ်လေးတွေဟာ ဆက်တိုက်ဆိုသလို AMK Creations ကနေ ထွက်ရှိလာခဲ့ကြတယ်။ “မိုင်တိုင်နှစ်ဆယ်”၊ “ကြယ်စင်ဆယ့်တစ်” စသည်ဖြင့်ပေါ့။ ဘလော့ဂါ အိန်ဂျယ်လှိုင် စီစဉ်ထုတ်ဝေတဲ့ “မိုင်တိုင်နှစ်ဆယ်” စာအုပ်လေးရဲ့ အောင်မြင်မှုက အခုချိန်ထိ စာပေလောကရဲ့ အရောင်းရဆုံး စာအုပ်စာရင်းမှာ မှတ်တမ်းဝင်နေတုန်း။
တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်း ထုတ်ဝေမှုအနေနဲ့လည်း Synergy Publications က မိတ်ဆွေ ကိုသုတရဲ့ စီစဉ်ဖြန့်ချိမှုနဲ့အတူ ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ မနိုင်းနိုင်းစနေရဲ့ စာအုပ်လေးတွေကို ကျွန်တော်တို့ သတိထားလာမိခဲ့ကြတယ်။ အဲဒီ့ထဲမှာမှ “အမေ့လက်ရေး” ဆိုတဲ့စာအုပ်လေးက တော်တော်လေးကို ပေါက်ခဲ့တယ်လို့ ဆိုရပါလိမ့်မယ်။
နောက်ထပ် တစ်ဦးချင်း စီစဉ်ထုတ်ဝေမှုအနေနဲ့ ကျွန်တော်မှတ်မိသမျှကတော့ “အိပ်မက်ကောက်ကြောင်း” (မြသွေးနီ)၊ “လမင်းရှိုက်သံ” (အိမ့်ချမ်းမြေ့)၊ “ကျွန်တော်လွတ်ကျခဲ့တဲ့ မြို့တော်” (နေဘုန်းလတ်)၊ “ညီလေးရေ” (နေဘုန်းလတ်)၊ “အသင်နားမလည်နိုင်သော မိန်းမတစ်ယောက်”(မယ့်ကိုး)၊ “သော့လေးတစ်ချောင်း”(သက်တံ့ချို)၊ “စိန်ပန်းနဲ့ ကံ့ကော်တွေ အတူပွင့်ခဲ့တယ်”(ကေသွယ်)၊ “ကျွန်ုပ်နှင့် ကမောက်ကမ အိုင်တီလောက သရော်စာများ” (သူရဿဝါ)၊ “မိတောရဲ့ ရှတတနေ့စွဲများ”(အိမ့်ချမ်းမြေ့)၊ “စိတ်လိုလက်ရများ” ကဗျာစုစည်းမှု (ရှင်မားရု)၊ “ထင်ကျန်ရစ်စေ” (မိဇုစံ) စတဲ့ စာအုပ်လေးတွေ စဉ်ဆက်မပြတ် အသီးသီး ဆက်လက်ထွက်ရှိခဲ့ကြတယ်။ မကြာခင်မှာပဲ ဘလော့ဂါ စာရေးဆရာ သူရဿဝါရဲ့ ဒုတိယမြောက်ခြေလှမ်းဖြစ်တဲ့ “ထိထိရှရှ သရော်စာများ” ဆိုတဲ့စာအုပ်လေးကို စံပယ်စာအုပ်တိုက်ကနေ ထုတ်ဝေဦးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
“ဘလော့ဂ်တွေ သေသွားကြပြီ”၊ “ဘလော့ဂါတွေ ဘလော့ဂ်မရေးကြတော့ဘူး” ဆိုတဲ့အသံလေးတွေကို နောက်ပိုင်းမှာ ကျယ်ကျယ်လောင်လောင် ကြားလာရပါတယ်။ လိုအပ်ချက်တစ်ခုကြောင့် တစ်စုံတစ်ရာဟာ ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ရသလို လိုအပ်ချက်တစ်ခုကြောင့်ပဲ တစ်စုံတစ်ရာဟာ ကွယ်ပျောက်တတ်ရပြန်တယ်။ ဘလော့ဂ်တွေ ပေါ်ပေါက်ခဲ့တယ်။ စာရေးကောင်းတဲ့ ဘလော့ဂါတွေကို မွေးထုတ်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်။ တစ်ချိန်မှာတော့ ဘလော့ဂ်တွေ လုံးဝကွယ်ပျောက်သွားနိုင်ပါတယ်။ ဘလော့ဂါတွေလည်း ဘလော့ဂ်တွေဖက်ကို ခြေဦးလှည့်ချင်မှ လှည့်ဖြစ်နိုင်ပါတော့မယ်။ ဒါပေမယ့် ဒါဟာ ဘလော့ဂ်သေဆုံးသွားခြင်းတော့ မဟုတ်ခဲ့ပြန်ဘူး။ စာရေးဆရာ နေဝင်းမြင့်ရဲ့ “မနုဿီဟ ဝတ္ထုတိုများ” ထဲက အက်ဆေးခေါင်းစဉ်လေးတစ်ခုကို အငှားသုံးစွဲလိုက်ရရင်တော့ ဒါဟာ ‘မက်တာမော်ဖိုးဆစ်’ (Metamorphosis) အသွင်ကူးပြောင်းခြင်း ဖြစ်စဉ်တစ်ရပ်လို့ပဲ ကျွန်တော်ဆိုချင်ပါတယ်။
စာရေးသူနဲ့ စာဖတ်သူကြား ကူးလူးဆက်သွယ်ပေးနိုင်တဲ့ လိုအပ်ချက်ကို မြန်မြန်ဆန်ဆန် ဖြည့်စွမ်းပေးနိုင်ခဲ့တာကြောင့် ဘလော့ဂ်တွေဟာ ဝက်ဘ်ဆိုက်တွေထက် ပိုပြီးထင်ပေါ်ကျော်ကြားခဲ့တယ်။ အဲဒီ့အချက်ကို ပေးစွမ်းနိုင်ရုံသာမက သတင်းအချက်အလက် လျင်လျင်မြန်မြန် ပြန့်ပွားပေးနိုင်တဲ့ အားသာချက်ကိုပါ ဖြည့်စွမ်းပေးနိုင်ခဲ့လို့ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ဟာ ဘလော့ဂ်တွေကို နောက်ပိုင်းမှာ အနိုင်ပိုင်းနိုင်ခဲ့ပြန်တယ်။ ဒီအားသာချက်ကို ကျွန်တော်တို့ ဘလော့ဂါတွေအနေနဲ့ မုန်းတီးရှောင်ခွာနေလို့ မရပါဘူး။ မီးကို ကောင်းကောင်းအသုံးချတတ်ရင် ကိုယ့်အတွက် အသုံးဝင်သလိုပါပဲ။ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ရဲ့ အားသာချက်ကို ကျွန်တော်တို့ ဘလော့ဂါတွေ မှန်မှန်ကန်ကန် အသုံးချတတ်ရင် အင်မတန်လှပတဲ့ မက်တာမော်ဖိုးဆစ် ဖြစ်စဉ်လေးကို ကျွန်တော်တို့တွေ ဖန်တီးကူးပြောင်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
ကျွန်တော်တို့ ဘလော့ဂါတွေအနေနဲ့လည်း ပဓာနနဲ့ သာမညကို ခွဲခြားသိမြင်တတ်ဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်။ ထမင်းစားတဲ့အခါမှာ ပန်းကန်နဲ့ စားတတ်ကြပေမယ့် ပန်းကန်ဟာ တကယ်တော့ အရေးမပါလှပါဘူး။ အထဲက ထမင်းက ပိုအရေးပါတယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ တွေးကြည့်လိုက်တာနဲ့တင် သိနိုင်ပါတယ်။ ပန်းကန်မရှိရင် ကျွန်တော်တို့တွေ ငှက်ပျောဖက်လေးတွေပေါ် ထမင်းပုံလို့ လက်ရည်တပြင်တည်း ခင်းစားလို့ရတယ်။ သန့်ရှင်းတဲ့ သတင်းစာစက္ကူပေါ်မှာ ပုံစားလို့ရတယ်။ တကယ်တော့ ပန်းကန်တွေဆိုတာဟာ ကြားခံပစ္စည်းတစ်ခုသာသာပါပဲ။ ထမင်းကသာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ရှင်သန်မှုအတွက် လိုရင်းပဓာနဆိုတာ သတိချပ်မိဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။
ဒီလိုပါပဲ။ ကျွန်တော်တို့တွေ ရေးသားဖတ်ရှုနေကြတဲ့ စာပေအက္ခရာတွေကို ပညာရှင်တွေက ဆူးတွေ၊ ဆောက်တွေသုံးလို့ ကျောက်ထက်အက္ခရာပေါ် တစ်ချိန်က တပင်တပန်း ရေးထွင်းခဲ့ကြတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ အင်ကညစ်သုံးလို့ ထန်းရွက်ပေရွက်တွေပေါ်မှာ ရေးသားခဲ့ကြတယ်။ အဲသည့်နောက်ပိုင်းမှာတော့ မင်ခြောက်၊ မင်စိုတွေသုံးလို့ စက္ကူတွေပေါ်မှာ မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ကြတယ်။ နည်းပညာတွေ တိုးတက်ပြောင်းလဲလာတဲ့နောက် စီဒီ၊ ဒီဗွီဒီတွေပေါ်မှာ မှတ်တမ်းတင်ရုံသာမက မိုက်ကရိုချစ်(ပ်)လေးတွေမှာ ထည့်လို့ စာအုပ်ပေါင်းများစွာကို သိုလှောင်သိမ်းဆည်းလာနိုင်တဲ့အထိ ဆင့်ကဲပြောင်းလဲမှု ဖြစ်စဉ်တွေကို ကြုံတွေ့ရင်ဆိုင်လာခဲ့ရတယ်။ သူ့ခေတ်သူ့အခါနဲ့ သူ့အသုံးအဆောင် သူ့ပစ္စည်းတွေဟာ ကိုယ်စီကိုယ်ငှ အသုံးဝင်ခဲ့ကြမှာပါပဲ။ ဆူးဆောက်ကိုင်ထားတဲ့ ပဝေသဏီက ပညာရှင်တွေကို ကီးဘုတ်ကိုင်ထားတဲ့ ခေတ်သစ်နည်းပညာရှင်တွေက သရော်လှောင်ပြောင်မယ်ဆိုရင်တော့ ဒါဟာ တော်တော်လေးကို မရင့်ကျက် မပြည့်ဝတဲ့ စိတ်နေစိတ်ထားပဲ ဖြစ်မှာပါ။
ကျွန်တော်တို့ ဘလော့ဂါတွေအနေနဲ့လည်း “ဘာကြောင့်ဘလော့ဂါ ဖြစ်ခဲ့ရသလဲ၊ ဖြစ်ချင်ခဲ့သလဲ” ဆိုတာကို ကိုယ်တိုင်ပြန်မေးကြည့်ဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်။ စာရေးချင်တဲ့စိတ် အရင်းခံနဲ့ ဘလော့ဂါဖြစ်လာသူတွေ အတွက်ကတော့ ဘလော့ဂ်သေဆုံးခြင်း၊ မသေဆုံးခြင်းဟာ ပြဿနာတစ်ရပ် မဖြစ်သင့်သလို လွမ်းမောတမ်းတနေရမယ့် ငိုချင်းတစ်ပုဒ်လည်း မဖြစ်သင့်ဘူး။ မိမိရေးလိုက်တဲ့စာကို စာဖတ်သူအကြား ဘယ်လိုဘယ်ပုံ ပျံ့နှံ့ရောက်ရှိစေမယ်ဆိုတဲ့ လိုရင်းအချက်ကိုသာ အာရုံစိုက်ပြီး မိမိချစ်မြတ်နိုးတဲ့ စာပေရေးသားခြင်း အနုပညာကို စဉ်ဆက်မပြတ် ဆက်လက်ဖန်တီးသင့်တယ်လို့ ကျွန်တော်ယူဆမိတယ်။
အဲသလိုရေးသားတဲ့အခါမှာ ပုံနှိပ်စာရေးဆရာသော၊ ဘလော့ဂါ စာရေးဆရာသောလို့ ခွဲခြားရှုမြင်မှုမရှိဘဲ မြန်မာစာပေလောကကောင်းကင်ကြီး ပိုမိုပြည့်စုံ၊ လင်းလက်လှပစေဖို့အတွက် ဝိုင်းဝန်းဖြည့်ဆည်းပေးနေကြတဲ့ ကြယ်စုလေးတွေ၊ အလင်းတန်းလေးတွေ၊ ဂလက်ဆီလေးတွေအဖြစ် တစ်ဦးပေါ်တစ်ဦး အပြန်အလှန် ရှုမြင်မိကြဖို့ကိုလည်း ကျွန်တော်တောင့်တမိတယ်။ ပုံနှိပ်စာရေးဆရာတွေမှာ သူတို့ဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့ စာပေခရီးက အယ်ဒီတာစားပွဲပေါင်းများစွာကို ဖြတ်သန်းခဲ့ပြီးမှ နာမည်တစ်ခုကို ထူထောင်နိုင်ခဲ့တာကြောင့် မှတ်ကျောက်တင်ခံနိုင်တဲ့ စာပေအရေးအသားတစ်ရပ် ရှိတယ်လို့ ယုံကြည်ယူဆမှု ရှိတတ်ကြပါတယ်။ ဒါဟာ ငြင်းဆိုနေရမယ့် အချက်တစ်ရပ်မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အဲသလိုမျိုး အယ်ဒီတာစားပွဲတွေကို မဖြတ်သန်းဘဲ မိမိဖာသာ သုတ်သင်ရေးသားပြုစုလိုက်တဲ့ အရေးအသား၊ အတွေ့အကြုံတွေဟာ အဆင့်မမီနိုင်ဘူးလို့ သတ်မှတ်လာမယ်ဆိုရင်တော့ ဒါဟာတစ်ဖက်သတ် အတွေးအခေါ် တစ်ရပ်ဖြစ်သွားပြီ။ ဘက်မမျှတဲ့ ဆင်ခြင်သုံးသပ်မှု တစ်ခုဖြစ်သွားပြီလို့ ဆိုရပါလိမ့်မယ်။
ကျွန်တော်တို့ ဘလော့ဂါတွေဟာ စာကိုချစ်လို့ ရေးကြသူတွေ များပါတယ်။ ချစ်လို့ရေးတဲ့အတွက် ရေးချင်မှ ရေးသလို အလုပ်မအားလပ်တဲ့အခါမျိုး၊ စာရေးချင်စိတ်မရှိတဲ့ အခါမျိုးကျပြန်ရင်လည်း မရေးကြပြန်ပါဘူး။ ဒါဟာသိပ်ကောင်းတဲ့ လက္ခဏာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဘလော့ဂါတွေ စာရေးပြီဆိုရင်တော့ တကယ်ကို ရေးချင်လာလို့ ရေးတဲ့အတွက် စိတ်အားထက်သန်မှုက တရှိန်ရှိန်နဲ့ စီးဆင်းဖြစ်ပေါ်နေတတ်ပါတယ်။ ရေးပြီဆိုတဲ့အခါမှာလည်း တစ်ဦးတစ်ယောက်က ဆင်ဆာဖြတ်တောက်မှု မရှိတဲ့အတွက် လွတ်လပ်စွာ တွေးခေါ်ပါတယ်။ စံစနစ်တစ်ခုနဲ့ ထိန်းချုပ်ထားမှု မရှိတဲ့အတွက်လည်း လွတ်လပ်စွာ ရေးသားပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဘလော့ဂါတွေရဲ့ စာတွေကို ဖတ်ရတာ စာဖတ်သူရဲ့ နှလုံးသားကို တိုက်ရိုက်ထိမှန်စေသလို ခံစားရတယ်။ ကိုယ့်အနားမှာ လာထိုင်ပြီး တတွတ်တွတ် ပြောပြနေသလို အသက်ဝင်တယ်။
စာရေးတဲ့ဘလော့ဂါတွေက ပုံနှိပ်စာရေးဆရာတွေကို ဘယ်လိုမှ သဘောမထားတတ်ကြပေမယ့်လည်း ပုံနှိပ်လောကထဲက စာရေးဆရာတစ်ချို့ကတော့ ဘလော့ဂါတွေပေါ်ကို အမြင်တိမ်းစောင်းမှုတွေ၊ ပြစ်တင်ကဲ့ရဲ့မှုလေးတွေ ရှိတယ်လို့ ကြားရတဲ့အခါမျိုးမှာ တော်တော်လေးကို စိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်။ စာရေးတယ်ဆိုတာဟာ စာသင်ခန်းမှာ ဆရာမက စာသင်သလိုမျိုး ဘယ်နေရာမှာ ဘယ်လိုရေး၊ ဘယ်နေရာမှာ ဘယ်လိုဖွဲ့ဆိုပြီး ရေးရတဲ့အရာမျိုးမှ မဟုတ်တာ။ အဆင့်မီတယ်၊ မမီဘူးဆိုတဲ့ ပေတံတွေ၊ စည်းကနားတွေနဲ့ အနုပညာမြောက်တယ်၊ မမြောက်ဘူးဆိုတာကို သတ်မှတ်တိုင်းတာလို့ ရတဲ့အရာတွေမှ မဟုတ်တာ။ ဂျက်လန်ဒန်ဟာ ရွှေတူးသမား မဟုတ်ခဲ့ဘဲ ပညာတတ် လူကုံထံ အသိုင်းအဝိုင်းကသာ လာခဲ့သူတစ်ယောက်ဆိုရင် ‘Call of the Wild’ တို့၊ ‘The White Fang’ တို့လိုမျိုး ကမ္ဘာကျော် ဝတ္ထုရှည်တွေ ရေးနိုင်ခဲ့ပါ့မလားလို့ ကျွန်တော်သံသယ ဝင်မိတယ်။
ဒီလိုပြောလို့လည်း ဘလော့ဂါတွေဟာ ကြုံရာကျပမ်း လုပ်ကိုင်စားသောက်နေကြသူများရယ်လို့ မမှတ်ယူစေချင်ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ ဘလော့ဂါတွေမှာ ရာထူးရာခံ ကြီးကြီးမားမားတွေကို တာဝန်ယူလုပ်ကိုင်နေကြတဲ့ နိုင်ငံတကာ အတွေ့အကြုံ ပြည့်ဝရင့်ကျက်သူတွေ ပါသလို၊ အဆင့်မြင့်တက္ကသိုလ်တွေမှာ ပညာဆည်းပူးလေ့လာနေကြတဲ့ ပညာရှင်တွေလည်း ပါပါတယ်။ ကျောင်းသားအရွယ် ငချွတ်လေးတွေလို့ ထင်ရပေမယ့်လည်း ကိုယ့်လက်ကိုယ့်ခြေနဲ့ ကိုယ့်ထမင်းကိုယ်ရှာစားပြီး ကိုယ့်ဝမ်းကိုယ်ကျောင်းနေကြရတဲ့ ကိုယ့်ထူးကိုယ်ချွန်သမားတွေလည်း ပါပါတယ်။ ဘဝဖြတ်သန်းမှု အတွေ့အကြုံအားဖြင့် လျော့တိလျော့ရဲ ရှိကြသူတွေ မဟုတ်ဘူး၊ ဝမ်းစာမပြည့်သူတွေ မဟုတ်ဘူးလို့ ဆိုလိုချင်တာပါ။ စုန်းပြူးတစ်ချို့တော့ ပါကောင်းပါလိမ့်လေမပေါ့။ ဒါကတော့ ဘယ်နေရာမှာမှ ရှောင်လွှဲလို့ မရတဲ့ သဲအရောရော ကျောက်အရောရော ဖြစ်စဉ်မျိုးပါ။
မြန်မာစာပေလောက ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ဆိုတာ စာပေလိုက်စားတဲ့ မျိုးဆက်သစ်တွေကို စဉ်ဆက်မပြတ် မွေးထုတ်ပေးနေနိုင်ဖို့၊ ပြုစုပျိုးထောင်ပေးနေနိုင်ဖို့ လိုပါတယ်။ ဒီလိုအချိန်မှာ အင်အားအပြည့်နဲ့ စီးဆင်းလာတဲ့ နိုင်ငံတကာက မြန်မာဘလော့ဂါလူငယ်ထုကြီးကို မကြိုဆို မဝမ်းမြောက်နိုင်တာကတော့ အင်မတန်မှ ဝမ်းနည်းဖွယ်ရာ ဆုံးရှုံးမှုတစ်ရပ်ပါပဲ။ ကျွန်တော်တို့ ဘလော့ဂါတွေဟာ မြန်မာစာပေကို ချစ်လွန်းလို့ ရေးတာပါ။ မြတ်နိုးလွန်းလို့ ရေးတာပါ။ ဒါကို လက်တွဲခေါ်ယူမှု မလုပ်နိုင်ရင်နေ၊ ပြစ်တင်ကဲ့ရဲ့မှုလုပ်တာမျိုး၊ တန်းညှိတာမျိုးတွေတော့ မလုပ်သင်ဘူးလို့ ယူဆမိတယ်။ ဒီလိုတွေ ပြောနေလို့ အသနားခံနေတယ်လို့လည်း မယူဆပါနဲ့။ ဒါဟာ မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်ချက်ပြည့်ဝကြောင်း ပြသနေတာပါ။ စိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ်လို့လည်း မတွေးခေါ်ပါနဲ့။ ဒါဟာ ခေတ်ပြိုင်ရေစီးကြောင်းတစ်ရပ် ရှိတယ်ဆိုတာကို သိသာစေချင်ရုံ သက်သက်ပါ။
နေ့ထူးနေ့မြတ်လေးတစ်ခုကို ကျွန်တော်တို့တွေ သတ်မှတ်လေ့ရှိတာဟာ အဲဒီ့နေ့ရက်လေးကို ရောက်တိုင်းရောက်တိုင်း အကြောင်းအရာလေးတစ်ခု (သို့မဟုတ်) ဖြစ်ရပ်လေးတစ်ခုကို အထူးတလည် အမှတ်ရအောက်မေ့နေစေချင်တဲ့ ရည်ရွယ်ချက်လေး အရင်းခံလို့ပါပဲ။ သစ်တောသစ်ပင်တွေကို ထိန်းသိမ်းစိုက်ပျိုးဖို့ အချိန်တိုင်း သတိရချင်မှ ရတတ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် “ကမ္ဘာ့သစ်ပင်စိုက်ပျိုးရေးနေ့” လို နေ့မျိုးလေးမှာတော့ သစ်တောသစ်ပင်တွေရဲ့ အရေးပါပုံကို တဒင်္ဂလောက်ဖြစ်ဖြစ် ဆင်ခြင်သုံးသပ်မိပြီး သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးအတွက် တတ်နိုင်သလောက် ဝိုင်းဝန်းပံ့ပိုးဖို့ သတိချပ်မိနိုင်ကြပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော်တို့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကို မကြာခဏ သတိရမိချင်မှ ရမိနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အာဇာနည်နေ့မှာတော့ ဗိုလ်ချုပ်နဲ့တကွ ကျဆုံးလေပြီးသော အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေ အကြောင်းကို ခဏလောက်လေးပဲဖြစ်ဖြစ် အချိန်ပေးပြီးတော့ကို တွေးတောဆင်ခြင်မိတတ်ကြတယ်။
ဒီလိုပါပဲ။ ကျွန်တော်တို့ တစ်ချိန်က ဘလော့ဂ်တွေပေါ်မှာ ပျော်ပျော်ပါးပါး ရေးခဲ့ကြတာ၊ ဘလော့ဂါအချင်းချင်း ချစ်ခင်ရင်းနှီးစွာ ကျီစယ်နောက်ပြောင်ခဲ့ကြတာ၊ ကိုယ့်ဘဝဖြတ်သန်းမှု ပုံရိပ်လေးတွေကို လွတ်လပ်ရဲတင်းစွာ မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ကြ၊ ရိုးသားပွင့်လင်းစွာ ဆွေးနွေးခဲ့ကြတာလေးတွေကို သတိရမိကောင်း ရမိနိုင်ပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ် မေ့လျော့ကောင်းလည်း မေ့လျော့နေနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကမ္ဘာ့ဘလော့ဂင်းဒေး (World Bloggers’ Day) ဖြစ်တဲ့ ဩဂုတ် (၃၁) ရက်နေ့မှာတော့ တစ်ချိန်က ကိုယ်တိုင် ရင်ခုန်ယစ်မူးစွာနဲ့ စီးဆင်းဖြတ်သန်းခဲ့ဖူးတဲ့ မြန်မာဘလော့ဂ်လေးတွေအကြောင်းကို ကျွန်တော်တို့တွေ တခုတ်တရလေး တမ်းတလွမ်းဆွတ် သတိရနေကြမယ်ဆိုရင်ဖြင့်….
မှတ်ချက်။ ။ ဘလော့ဂါတိုင်းရဲ့ နာမည်ကို ပါအောင်ရေးဖို့ မဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက် တစ်ချို့ကျန်ရစ်ခဲ့တဲ့ နာမည်လေးတွေကိုယ်စား နားလည်ပေးနိုင်ကြမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ ဘလော့ဂါတစ်ယောက် အနေနဲ့ အများကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ပို့စ်လေးတစ်ခုလို့ နားလည်ပေးမယ်ဆိုရင် ရေးရကျိုးနပ်ပါတယ်. :)
:) (smile with tears ) :)
စာရေးခြင်းကို ချစ်တဲ့လူများအားလုံးအတွက် ကျယ်တဲ့ပင်လယ်ကြီးရှိပါတယ်။
သေသေချာချာဖတ်သွားပါပြီ ဘရာသာ ရန်အောင်ရေ
Blog Day နေ့ နဲ့ နေ့တိုင်းပျော်ရွှင်ပါစေ။
ဒါကြောင့် ဘလော့ဂါ ရန်အောင် ဖြစ်နေတာပဲ ... :)
ဘလော့ဂ်ဒေးအတွက် ရေးသားထားတဲ့ ကိုရန်အောင်ရဲ့post လေးကို အရမ်းနှစ်သက်ပါတယ်။ ခေါင်းစဉ်အတိုင်း စာရေးသားခြင်းကို လုံးဝမပျောက်ဆုံးသွားချင်ဘူး။ နံပတ်စဉ် ၅ ရေးထားတာ ရင်ထဲကိုအထိဆုံးပါဘဲ ကိုရန်အောင်။
တစ်ကယ့်ကို စိတ်ရှည်လက်ရှည်နဲ့ အချိန်အကြာကြီး ..ပေးပြိး ရေးထားတာပဲအကို ရန်......:) Happy Blog Day. ..ပါအကို ...!!!
အရမ်းအရမ်းကို လွမ်းတာပါပဲ ဘကြီးအောင်ရယ်...
ဒီပိုစ်လေးက တော်တော်လေး ပြည့်စုံကောင်းမွန်ပါတယ် ကိုရန်ရေ...
Happy Belated Blog Day :)
ရောက်လာတဲ့ အခါမှာ facebook မှာ
ရေးချင်တာရေးထားတဲ့ စတေးတပ်တွေ ကို ပြ
ကိုရန်အောင် သုံးသပ်ပြတာကို သဘောကျပါတယ်။ ဘလောက်ဂ်ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကိုက ကိုယ်ရေးချင်တာကို ကိုယ်လွတ်လပ်စွာ ဖော်ပြဖို့ပဲ။ ဘယ်သူ့ခွင့်ပြုချက်၊ ဘာအကန့်အသတ်မှ မရှိဘဲ ရေးနိုင်ခွင့်ကို ခုချိန်ထိ သဘောကျနေဆဲပါပဲ။
ဖုတ်လှိုက်ဖုတ်လှိုက် ဘလောက်ဂ်ဂါ တစ်ဦး
>ထရီဆာ.... မျက်ရည်တော့ မကျနဲ့ ထရီဆာ.. ဘလော့ဂ်ဆိုတာ ဘဝတစ်ခု မဟုတ်ခဲ့ဘူး... :P
>Phyo Phyo... ဟုတ်ပါ့. Sis ရေ... အပြောကျယ်တဲ့ ပင်လယ်အော်ကြီးထဲမှာ မောတယ်လို့ မထင်ဘဲ ဆက်လက်ကူးခတ်ရင်း... ရင်း... ရင်း... :D
>မေဓာဝီ... ဩော်.. မမေတစ်ယောက်လည်း ဒိဋ္ဌေဒိဋ္ဌမတ္တံ နည်းလမ်းတွေ သုံးတတ်နေပါပေါ့လား. ဘလော့ဂါ ရန်အောင်ပါဆိုမှ ဘလော့ဂါရန်အောင် ဖြစ်နေတာပဲ လုပ်နေတယ်. :P
>လရိပ်အိမ်... နံပါတ် ၅ ရေးတုန်းက ကိုယ်လည်း တထိထိ ဖြစ်နေတယ်. လက်ခမောင်းတွေ ထခတ်နေတာလေ. အဟတ်ဟတ်.
>အိန်ဂျယ်လှိုင်... ဟုတ်တယ်. ညီမ. အဲဒီ့ပို့စ်ရေးတုန်းက ကြက်ဖ ၃ ကောင် တစ်လှည့်စီ တွန်သွားခဲ့ကြတယ်. :D
>ကိုရင်နော် ခင်လေးငယ်... ဒီကလည်း လွမ်းနေရတာပါပဲ နော်နော်နဲ့ ငယ်ငယ်ရယ်... :P
>အိမ့်ချမ်းမြေ့... မလေးဆီက ဒေတာတွေ မသွားလို့ ပိုကောင်းသွားတာ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်. :)
>ညိုလေးနေ... Same to you... Happy Blogging Day...
>Blackroze... ဟုတ်တယ်. ကိုယ့်မျိုးဆက်တွေကို ဒီအကြောင်းတွေ သေချာလက်ဆင့်ကမ်းနိုင်ဖို့အတွက် အနစ်နာခံပြီး ကိုယ်အိမ်ထောင်ပြုဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်. :D
>ပုံရိပ်... အကန့်အသတ်မရှိဘဲ ရေးနိုင်တဲ့အတွက် အကန့်အသတ်မရှိလည်း ရပ်နားသွားနိုင်တယ်. ဒါကြောင့် ဖုတ်လှိုက်ဖုတ်လှိုက် မဖြစ်စေဘဲ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဆွဲတင်ဖို့ ကိုယ့်မှာ ဝတ္တရားအရှိဆုံးပဲ... ထတော့ ပုံရိပ်... Wake up!!!! :D
သိပ်ကောင်းတယ် ကိုရန်...၊ စ၊ လယ်၊ ဆုံး သုံးပါးစလုံးမှာ အချက်အလက်၊ ဖြစ်စဉ်သမိုင်းကြောင်း၊ လာရာနဲ့ လားရာ၊ စတာတွေနဲ့အတူ ခေတ်ပြိုင်ကိစ္စတွေလည်း မကျန်ခဲ့ရစေဘဲ စာပိုဒ်တစ်ခုခွဲပြီး သုံးသပ်ထားတာ သဘောကျတယ်ဗျာ...၊
ဟုတ်တယ်ဗျ..၊ ဘလော့ဂ်တစ်ခု တည်ဆောက်ဖို့ အတော်များများက ခေတ်ဦးဘလော့ဂါတွေ ပြုစုခဲ့တဲ့ ကျူတိုရီယယ်တွေကို အားကိုးခဲ့ကြပေမယ့် နောက်ပိုင်းမှာ template ပြင်တာ၊ ဘလော့ဂ်ဆိုဒ်ကို ချဲ့တာ၊ အရောင်ပြောင်းတာ၊ အရည်အသွေးကောင်းတဲ့ ဓါတ်ပုံတင်တာ.. စတဲ့ ကိစ္စရပ်တွေမှာ ကိုရန်ရေးခဲ့တဲ့ လမ်းညွှန်ပို့စ်တွေက အင်မတန်မှ အထောက်အကူ ပြုခဲ့တယ်၊ ကျောက်စာခေတ်ကနေ ကွန်ပျူတာစာစီ ခေတ်အထိ ကြားခံ မီဒီယာတွေ အမျိုးမျိုး ပြောင်းသွားပေမယ့်လို့ အဓိကကျတဲ့ စာပေစီးဆင်းမှုကတော့ ဆက်ပြီးရွေ့လျားနေတုန်းပဲ ဆိုတာကို ထောက်ပြသွားတာလည်း သတိချပ်စရာပါ၊ အဲဒီလို ရှုထောင့်ကတွေးရင် ဘလော့ဂါ၊ ဖေ့စ်ဘွတ်ကာ ဆိုတဲ့ အမြင်တွေလည်း အတော်လေး လျော့သွားလိမ့်မယ်လို့ ကျနော်ထင်တယ်..၊
အခုလို အထိမ်းအမှတ်နေ့လေးမှာ ဘရိုရဲ့ အိပ်စက်ခြင်းတွေနဲ့ စက်ပြီး ဖန်တီးယူခဲ့ရတဲ့ ဟောဒီပို့စ်လေးအတွက် ကျေးဇူးစကား ဆိုရင်း (အနည်းငယ် နောက်ကျသော) ပျော်ရွှင်စရာ ဘလော့ဂ်ဒေး ဖြစ်ပါစေဗျား...။
(ဘိုင်သဝေး ဘရို.. ကျနော့်ရဲ့ Blog roll မှာ ကိုရန်ရဲ့ ဘလော့ဂ်စပေါ့ကို ပြန်ချိတ်လို့ မရဘူး ဖြစ်နေတယ်ဗျ၊ အရင် ဒေါ့နက်ကို ဖျက်ပြီး အခုလက်ရှိ ဘလော့ဂ်ကို ထည့်လည်း Blog roll မှာ ဒေါ့နက်ပဲ ပြတယ်၊ ဘယ်လောက်ဖျက်ဖျက်၊ ဘယ်လောက် reset လုပ်လုပ် သူ့ရဲ့ မင်မိုရီမှာ ဒေါ့နက်ပဲ သိမ်းထားသလား မသိဘူး၊ အဲဒါပဲ ပြန်ပြန် တက်လာတယ်)
ဘလော့လောကရဲ့သမိုင်းလေးကို စနစ်တကျ ဝေမျှပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါကိုရန်အောင် ။
Happy Belated Blog Day ပါအစ်ကိုရန်အောင်...
ကောင်းလိုက်တဲ့ ဆောင်းပါး အကိုရန်
အချိန်ပေးဖတ်ရမယ်မှန်း သိလို့ကို နောက်ဆုံးမှ ဖတ်ဖြစ်တာ
သေသေချာချာ မြန်မာဘလော့ဂ်ရေစီးကြောင်းကို သုံးသပ်ပြီး တစ်ချက်ချင်းစီ ပြောပြသွားတာ စာတမ်းတစ်ခုလိုပဲ သေသပ်ကောင်းမွန်လှတယ်....။
အကိုရန် ထည့်သွင်းထားတဲ့ ပုံတွေကို ညီမ မြင်ဖူးနေတယ်..။
ဘယ်တုန်းကလဲတော့ မမှတ်မိတော့ဘူး...အဲ့တုန်းက ကိုယ် နဲ့ ဝေးကွာလှသော ပညာရှင်များရယ်လို့ (ဘလော့ဂ်ဆိုတာ ဘာမှန်းတောင် မသိဘဲ) အားကျငေးမောခဲ့ဖူးတယ်..။
အကို ပြောသွားတဲ့ ထမင်းသာလိုရင်းပဲ ဘာနဲ့ထည့်ထည့်ဆိုတဲ့ ဥပမာကို သဘောကျမိတယ်..။
>ကိုညီလင်းသစ်... ကျေးဇူးဘရို. စာရေးရင်းနဲ့ ကိုညီလင်းသစ်တို့လို ရင့်ကျက်ပြည့်ဝတဲ့ ဘလော့ဂါမိတ်ဆွေကောင်းတွေ ရရှိလာတာ ကံကောင်းခြင်းတစ်မျိုးလို့ ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်။ ဘလော့ဂ်လင့်ခ်ကို ကျွန်တော်ပြန်လုပ်လိုက်ပါမယ်။ .Net ကို သက်တမ်းထပ်မတိုးဖြစ်လိုက်လို့ အဲဒီ့လို ဖြစ်သွားတာ ထင်တယ်ဗျ. ဆောရီး ဘရို. ပြင်ပြီးသွားရင် ပြန်ပြောပေးပါမယ်.
>ဆုမြတ်မိုး... တွေ့ရတာ ဝမ်းသာပါတယ် ညီမ. စာတွေဆက်ရေးဖြစ်ပါစေလို့လည်း ဆန္ဒပြုပါတယ်. :)
>ရွှေအိမ်စည် (a.k.a သူသူ) ဟုတ်တယ် ညီမလေးရေ. စာရေးနေရင်းနဲ့ ဗိုက်ဆာလို့ ထမင်းထစားရာက အဲဒီ့ဥပမာလေး ရသွားလိုက်တာ. အာခီးမီးဒီးလို Eureka ဆိုပြီး ထမပြေးမိတာ ကံကောင်း. အဟတ်ဟတ်. ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့စွာ ဘလော့ဂင်းနိုင်ပါစေ ညီမလေး သူသူ...
ဆန်ရင်းနာနာဖွတ်ဆိုသလို ဘလော့ဒေးအတွက် ရည်ရွယ်ရေးတဲ့ ပို့စ်တွေထဲမှာ ကိုရန်အောင့်ပိုစ့်ကို နောက်ဆုံးမှ ဖတ်လိုက်တယ်။
တစ်ခါဖတ်တယ်၊ မကျေနပ်သေးဘူး၊ ဒါနဲ့ နှစ်ခါပြန် ဖတ်ပစ်လိုက်တယ်။ ပြည့်စုံတယ်။
ခေါင်းတညိတ်ညိတ်ဖြစ်လာတဲ့အထိ ကျေနပ်တယ်။ ဘလေ့ာရေးသူတိုင်း သိထားသင့်တဲ့ ဘလော့အစဦးကာလရဲ့ အချက်အလက်တွေ ပါဝင်နေယုံမျှမက၊ ဘလော့ဂါဆိုတာ ဘာလဲ၊ ဘလော့ဂါတစ်ယောက်ရဲ့ ခံယူချက်နဲ့ယုံကြည်ချက်၊ ဘလော့ဂါတွေရဲ့ လက်ရာစာပေ အရည်အသွေး.. စတာတွေက စာတစ်ပိုဒ် ဖတ်ပြီးတိုင်း ပျိုးခနဲ ပြက်ခနဲ စိတ်နှလုံးကို လာထိတယ်။
Bravo ပါ Bro...။ ကျွန်မလိုပဲ ဖတ်မိသူ ဘလော့ဂါတိုင်းရဲ့ စိတ်နှလုံးတွယ်ငြိမိစေမဲ့ ဘလော့ဒေးအမှတ်တရပို့စ်လေး...။
ဒီပို့စ်ကိုဖတ်ရတာ 'အဓိပဓိလမ်းနဲ့ သစ်ပုတ်ပင်'အကြောင်းကို 'blogger version' နဲ့ ဖတ်ရသလိုပါပဲလား :)
ကျနော်တို့ကတော့ blog ခေတ်အပျက်မှာဝင်လာပြီး ၊ ရေးချင်ရာရေး ဆော်ချင်ရာဆော်ရင်း ကိုယ့်ကိုယ်ကို blogger တစ်ယောက်ဆိုတာ မေ့နေသူပါဗျာ :)
ဒီစာဖတ်ပြီးတော့ အားအင်တွေ ရတယ်
ဘလော့ဂါတစ်ယောက် ဖြစ်ရတာ ဂုဏ်ယူမိသွားတယ်
သိပ်ကောင်းတဲ့ ပို့စ်တစ်ခုပါပဲ အစ်ကို
စာမေးပွဲပြီးရင်တော့ ဘလော့ပေါ် စာတွေ
အဆက်အပြတ် ရေးတော့မယ် အစ်ကိုရေ
- Blogging မှာ အပေါ်လွင်ဆုံး နဲ့ အနှစ်ခြိုက်ရဆုံး က ... အခုလို ရိုးရှင်းတဲ့ အရေးအသား နဲ့ ... ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း စကားတွေပါပဲ အစ်ကို ... ။
- Blog ရဲ့ သမိုင်း ကို ဖတ်ရသလိုပါပဲ ... ။
- ကျွန်တော် တစ်ယောက်တည်း ... Link Update မရဘူး ထင်နေတာ ... ကို ညီလင်းသစ် လည်း ပါတာပဲကိုး ... :)
- Senior Blogger တစ်ယောက် အနေနဲ့ Blogging အပေါ်မှာ ထားတဲ့ သံယောဇဉ် ကို လေးစားမိပါတယ် ခင်ဗျာ ...
- FB ထက် Blog ကို Personal ပိုဖြစ်တယ် ၊ Privacy ပိုရှိတယ် ထင်မိတာပါပဲ ... ။
- အဆင်ပြေမယ် ဆိုရင် ... ကျွန်တော် မလုပ်တတ် ၊ လုပ်တတ် လုပ်ထားတဲ့ Site ကို လာလည်ရင်း ... သုံးသပ် အကြံပေးဖို့လည်း တောင်းဆိုချင်ပါတယ် ခင်ဗျာ ...
>အန်တီအန် (သို့) မမြသွေးနီ... :) ခေတ်မီနေလိုက်တာများ နာမည်တောင် အတိုကောက်လေး သုံးလိုက်သေးတယ်. ဆန်ရင်းနာနာဖွပ်ပါလေ. ဖွပ်သာဖွပ်ပါ. :D အစက ၄ မျက်နှာလောက်ဆိုတော်ပြီ လုပ်တာ... ရေးရင်းနဲ့ ၉ မျက်နှာ ဖြစ်သွားတယ်. မုဒ်ဝင်သွားချက်. :P
>မန်းကိုကို... ဥပမာလေး ပေးသွားတာ လှလိုက်တာဗျာ. နောက်နောင် သုံးစရာ စကားလေးတစ်ခွန်း လက်ဆောင်ရလိုက်သလိုပါပဲ. :) အားပေးတာ ကျေးဇူး ဘရို.
>နွေလ... အောင်မြင်တဲ့ ဘလော့ဂါတစ်ယောက် ဖြစ်ပါစေလို့ ဆန္ဒပြုလိုက်ပါတယ်ဗျာ... စာမေးပွဲလည်း ကောင်းကောင်းဖြေနိုင်ပါစေ. :)
>Thein Gara ... ကျွန်တော်လည်း ဘလော့ဂ်လင့်ခ်လေးကို မပြင်ဖြစ်ဘူး ဖြစ်နေတာ. အချိန်နည်းနည်းပေးပြီး Hosting Site ပါ ပြောင်းလိုက်ပါဦးမယ်.. ဘရားသားရဲ့ ဆိုက်ကိုလည်း လာလည်ပါဦးမယ်. စာကောင်းပေမွန်လေးတွေ ဆက်လက်ရေးသားနိုင်ပါစေဗျာ... :)
စာပြန်ရေးဘို့ အတော် အားယူနေတဲ့ အချိန်မှာ ကိုရန်အောင်ရဲ့ ပို့စ်ကို ဖတ်မိတော့ အရင်က ဘလော်ဂါ ဘ၀ ကို လွမ်းလာတယ်။ ကိုယ်တိုင်ရေး ပို့စ် အဟောင်းတွေ ပြန်ဖတ် ဖြစ်တယ်။ စာပြန်ရေးဘို့ အားရှိလာတယ်။ ကိုယ်တိုင် ကြိုးစား တည်ထောင်ထားတဲ့ ဘလော့ကို ပြန် အသက်ဝင်စေချင်လာတယ်။ မက်တာမော်ဖိုးဆစ် ကောက်ကြောင်းပို့စ် အတွက် အထူးကျေးဇူးပါ ကိုရန်အောင်။
ကျွန်တော်ကတော့ ၂၀၀၉ လောက်က ကို စေတန်ဂေ့ါ တို့ရေးတဲ့စာအုပ်နဲ့ စမ်းတ၀ါးဝါး ရေးဖြစ်ခဲ့တယ်.။ တကယ့်တကယ်စရေးဖြစ်တော့ ၂၀၁၁ ဒီဇင်ဘာမှ ပါ.။ ကိုရန်အောင့်နာမည်ကိုကြားဖူးတာ ကြာပါပြီ..။ စိတ်ရှည်လက်ရှည် ရေးထားတဲ့ ဘလော့ဒေးပို့စ်လေးကိုလည်း သဘောကျစွာ ဖတ်သွားပါတယ်အစ်ကို.။ နောက်လည်း လာဖတ်ပါရစေ.။.
ဘလော့ပြန်ရေးဖြစ်အောင် တွန်းအားပေးသွားတဲ့ ကွန်မန့်လေးအတွက် ကျေးဇူးအထူးပါ ကိုရန်အောင်။ အွန်လိုင်းနဲ့ ဝေးနေတာ နဲနဲကြာသွားလို့ FB မှာလဲ ဘာ Activity မှမရှိတာကြာနေပြီ။ FB မှာ အခုပဲ အက်လုပ်လိုက်ပါမယ်နော်။ :)
ကျွန်တော်လည်း ဖတ်သွားတယ်နော် အကို
>ပန်းခရမ်းပြာ၊ မိုးသက်၊ မအိမ်သူ၊ ဇော်သူရ.... ကော်မန့်လေးတွေအတွက် အားလုံး ကျေးဇူး. စာတွေလည်း ပုံမှန်လေး ပြန်ရေးနိုင်ကြပါစေလို့ ဆန္ဒပြုပါတယ်ဗျာ. :)
အဟမ်း.... ဖုန်ခါ တံမျက်စည်းလှည်းပေးသွားပါတယ်.. အဟမ်းဟမ်း...